မွနျမာ့သဘာဝဆေးစှမျး တပငျတိုငျမွနနျး – Shangyimm
Posted on August 1, 2020 August 1, 2020 by Shangyi
တပင်တိုင်မြနန်းမှာပါတဲ့ Glycoside နဲ့ Flavonoid တွေဟာ အင်မတန်မှ အစွမ်းထွက်ပါတယ်..
(၁) အရေပြားအနာအမျိုးမျိုးကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်.. သူ့မှာ 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗯𝗶𝗼𝘁𝗶𝗰 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 ရှိလို့ မွှေးကျွတ်နာကအစ Carbuncle လို့ခေါ်တဲ့ အနာပဆုပ်မျိုးအထိ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်.. အနောက်တိုင်းဆေး Antibiotic တွေနဲ့ ကုသလို့မလွယ်ကူတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကိုတောင် သေစေနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်.. အရွက်ကိုတော့ အနာတွေအပေါ်မှာအုပ်ပေးရင် ရောဂါပိုးတွေကိုသေစေပြီး အနာကျက်မြန်တာ တွေ့ရပါတယ်.. အမြစ်(ဥ) ကို သွေးလိမ်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပါးစပ်ကသောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
(၂) သူ့မှာ 𝗔𝗻𝘁𝗶𝘁𝘂𝗺𝗼𝗿 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆 ရှိပါတယ်.. အဖုအကျိတ်မျိုးစုံကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်.. အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့သားအိမ်မှာဖြစ်တဲ့ Myoma လို့ခေါ်တဲ့ အကျိတ်တွေကို ကုသရာမှာ များစွာထိရောက်ပါတယ်.. အနောက်တိုင်းဆေးပညာအရတော့ သားအိမ်မှာအလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှပျောက်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် ခွဲစိတ်ဖို့မလိုသေးရင် သေးသွားအောင် တပင်တိုင်မြနန်းဥကိုစားပြီး ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်.. သက်ဆိုင်ရာမီးယပ်သားဖွားပါရဂူများနဲ့လဲ ပူးတွဲစမ်းသပ်လျက်ရှိတာ အောင်မြင်လျက်ရှိပါတယ်..
Myoma uterus ဆိုတဲ့ သားအိမ်မှာအလုံးအကြိတ်ဖြစ်တဲ့ရောဂါဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာ အင်မတန်မှအဖြစ်များပါတယ်.. တချို့လဲ တစ်ခုဖြစ်တတ်ပြီး တစ်ခါတစ်လေမှာ အများအပြားလဲ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်.. အသက် ၃၀ ကျော်ရင် ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိနေပြီး အသက် ၃၀ ကျော်အမျိုးသမီး ၁၀၀ မှာ ၂၀ ကနေ ၃၀ အထိလောက် ဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်.. အဲ့လိုဖြစ်ရင် ရာသီမမှန်တာတို့၊ သွေးဆင်းများတာတို့၊ သားအိမ်နေရာက ကိုက်ခဲတာတို့၊ ဆီးသွားလို့ခက်ခဲတာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်.. သူ့အနေနဲ့ ကင်ဆာအကျိတ်မဟုတ်လို့ သိပ်စိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပေမဲ့ ကြီးလာရင် ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်.. အသက်ငယ်သေးရင်တော့ သားအိမ်ကိုချန်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသရလို့ အသက်ကြီးရင်တော့ သားအိမ်ပါထုတ်ပစ်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသရလေ့ရှိပါတယ်..
(၃) နာတာရှည်အစာအိမ်ရောဂါကိုလဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်.. သူ့မှာ အစာအိမ်ရောဂါပိုးဖြစ်တဲ့ H.pylori ကိုသတ်နိုင်တဲ့သတ္တိရှိတဲ့အပြင် အနာကျက်စေတဲ့အာနိသင်ပါရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်..
တပင်တိုင်မြနန်းရဲ့အမြစ်ကို ဒီအတိုင်းသုံးဖို့ သိပ်မသင့်တော်ပါဘူး.. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
(၁) အမြစ်ဟာ မြေကြီးထဲကဖော်ပြီး ချက်ချင်းရေဆေး၊ နေလှမ်း၊ အခြောက်ခံမလုပ်နိုင်ရင် အစိုဓာတ်ကြောင့် မှိုတက်နိုင်ပါတယ်.. အဲ့ဒီမှိုတွေဟာ အမြစ်အတွင်းပိုင်းထဲအထိ စိမ့်ဝင်သွားတဲ့အတွက် အမှုန့်ကြိတ်ရင်လဲ ဆက်ပါနိုင်ပါတယ်.. အဲ့ဒီမှိုဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့မှိုဖြစ်ခဲ့ရင် တစ်နည်းအားဖြင့် မှိုဆိပ်တွေထုတ်တဲ့ မှိုဖြစ်ရင် စားသုံးသူတွေအတွက် အန္တရာယ်များပါတယ်..
(၂) သောက်တဲ့အခါမှာ တစ်နေ့ကို 10 g ကနေ 16 g လောက်အထိ သောက်ရတော့ 500 mg ဆေးပြားထုတ်ရင်တော့ အပြား၂၀ ကနေ ၃၂ ပြားအထိ သောက်ရတော့ အင်မတန်မှသောက်ရတာများပါတယ်..
(၃) အမြစ်မှာပါတဲ့ အချို့အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ Allergic ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် ယားယံတာတို့ အင်ပြင်ထွက်တာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်..
ဒါတွေကတော့ အမြစ်ကိုဒီအတိုင်းစားရင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ Side effect နဲ့ သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
အကောင်းဆုံးကတော့ သိပ္ပံနည်းကျ Extract လုပ်ပြီး သောက်တာပါပဲ.. Extract လုပ်တဲ့အခါ 75 % ethanol ကိုသုံးရပါတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဖြူမျိုးဆိုရင် သူ့မှာပါဝင်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အာနိသင်ရဲ့ ၄% နီးပါးလောက်ဟာ Alcohol မှာပျော်ဝင်ပြီး ၅% လောက်ဟာ ရေမှာပျော်ဝင်လို့ဖြစ်ပါတယ်.. အနီမျိုးဆိုရင်တော့ Alcohol မှာ ၅ % ကျော်ကျော်နဲ့ ရေမှာ 7% နီးပါး ပျော်ဝင်မှုရှိတာ တွေ့ရပါတယ်.. Extract ကိုထုတ်ပြီးသုံးရင် ခုနကပြောသလို မှိုတက်မှုလည်း မရှိတော့တဲ့အပြင် တစ်နေ့ကို ၂ လုံးလောက်ပဲသောက်ရလို့ အဆင်ပိုပြေပါတယ်.. Allergic ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အမြစ်တွေလဲ အဖတ်တွေထဲမှာ ကျန်ခဲ့လို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်..
တပငျတိုငျမွနနျးမှာပါတဲ့ Glycoside နဲ့ Flavonoid တှဟော အငျမတနျမှ အစှမျးထှကျပါတယျ..
(၁) အရပွေားအနာအမြိုးမြိုးကို သကျသာပြောကျကငျးစပေါတယျ.. သူ့မှာ 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗯𝗶𝗼𝘁𝗶𝗰 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 ရှိလို့ မှေးကြှတျနာကအစ Carbuncle လို့ချေါတဲ့ အနာပဆုပျမြိုးအထိ သကျသာပြောကျကငျးစပေါတယျ.. အနောကျတိုငျးဆေး Antibiotic တှနေဲ့ ကုသလို့မလှယျကူတဲ့ ရောဂါပိုးတှကေိုတောငျ သစေနေိုငျတာ တှရေ့ပါတယျ.. အရှကျကိုတော့ အနာတှအေပျေါမှာအုပျပေးရငျ ရောဂါပိုးတှကေိုသစေပွေီး အနာကကျြမွနျတာ တှရေ့ပါတယျ.. အမွဈ(ဥ) ကို သှေးလိမျးလို့ပဲဖွဈဖွဈ ပါးစပျကသောကျလို့ပဲဖွဈဖွဈ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ..
(၂) သူ့မှာ 𝗔𝗻𝘁𝗶𝘁𝘂𝗺𝗼𝗿 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆 ရှိပါတယျ.. အဖုအကြိတျမြိုးစုံကို ပြောကျကငျးစပေါတယျ.. အထူးသဖွငျ့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့သားအိမျမှာဖွဈတဲ့ Myoma လို့ချေါတဲ့ အကြိတျတှကေို ကုသရာမှာ မြားစှာထိရောကျပါတယျ.. အနောကျတိုငျးဆေးပညာအရတော့ သားအိမျမှာအလုံးဖွဈတယျဆိုတာနဲ့ ခှဲစိတျကုသမှပြောကျပါတယျ.. ဒါပမေဲ့ လောလောဆယျ ခှဲစိတျဖို့မလိုသေးရငျ သေးသှားအောငျ တပငျတိုငျမွနနျးဥကိုစားပွီး ကုသပြောကျကငျးနိုငျပါတယျ.. သကျဆိုငျရာမီးယပျသားဖှားပါရဂူမြားနဲ့လဲ ပူးတှဲစမျးသပျလကျြရှိတာ အောငျမွငျလကျြရှိပါတယျ..
Myoma uterus ဆိုတဲ့ သားအိမျမှာအလုံးအကွိတျဖွဈတဲ့ရောဂါဟာ အမြိုးသမီးတှမှော အငျမတနျမှအဖွဈမြားပါတယျ.. တခြို့လဲ တဈခုဖွဈတတျပွီး တဈခါတဈလမှော အမြားအပွားလဲ ဖွဈလရှေိ့ပါတယျ.. အသကျ ၃၀ ကြျောရငျ ဖွဈဖို့အလားအလာရှိနပွေီး အသကျ ၃၀ ကြျောအမြိုးသမီး ၁၀၀ မှာ ၂၀ ကနေ ၃၀ အထိလောကျ ဖွဈတာတှရေ့ပါတယျ.. အဲ့လိုဖွဈရငျ ရာသီမမှနျတာတို့၊ သှေးဆငျးမြားတာတို့၊ သားအိမျနရောက ကိုကျခဲတာတို့၊ ဆီးသှားလို့ခကျခဲတာတို့ ဖွဈတတျပါတယျ.. သူ့အနနေဲ့ ကငျဆာအကြိတျမဟုတျလို့ သိပျစိုးရိမျစရာမဟုတျပမေဲ့ ကွီးလာရငျ ဒုက်ခပေးနိုငျပါတယျ.. အသကျငယျသေးရငျတော့ သားအိမျကိုခနျြပွီး ခှဲစိတျကုသရလို့ အသကျကွီးရငျတော့ သားအိမျပါထုတျပဈပွီး ခှဲစိတျကုသရလရှေိ့ပါတယျ..
တပငျတိုငျမွနနျးရဲ့အမွဈကို ဒီအတိုငျးသုံးဖို့ သိပျမသငျ့တျောပါဘူး.. ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့
(၁) အမွဈဟာ မွကွေီးထဲကဖျောပွီး ခကျြခငျြးရဆေေး၊ နလှေမျး၊ အခွောကျခံမလုပျနိုငျရငျ အစိုဓာတျကွောငျ့ မှိုတကျနိုငျပါတယျ.. အဲ့ဒီမှိုတှဟော အမွဈအတှငျးပိုငျးထဲအထိ စိမျ့ဝငျသှားတဲ့အတှကျ အမှုနျ့ကွိတျရငျလဲ ဆကျပါနိုငျပါတယျ.. အဲ့ဒီမှိုဟာ အန်တရာယျရှိတဲ့မှိုဖွဈခဲ့ရငျ တဈနညျးအားဖွငျ့ မှိုဆိပျတှထေုတျတဲ့ မှိုဖွဈရငျ စားသုံးသူတှအေတှကျ အန်တရာယျမြားပါတယျ..
(၂) သောကျတဲ့အခါမှာ တဈနကေို့ 10 g ကနေ 16 g လောကျအထိ သောကျရတော့ 500 mg ဆေးပွားထုတျရငျတော့ အပွား၂၀ ကနေ ၃၂ ပွားအထိ သောကျရတော့ အငျမတနျမှသောကျရတာမြားပါတယျ..
(၃) အမွဈမှာပါတဲ့ အခြို့အစိတျအပိုငျးတှဟော Allergic ဖွဈတတျတဲ့အတှကျ ယားယံတာတို့ အငျပွငျထှကျတာတို့ ဖွဈတတျပါတယျ..
ဒါတှကေတော့ အမွဈကိုဒီအတိုငျးစားရငျ ဖွဈနိုငျတဲ့ Side effect နဲ့ သူ့ရဲ့အားနညျးခကျြတှပေဲ ဖွဈပါတယျ..
အကောငျးဆုံးကတော့ သိပ်ပံနညျးကြ Extract လုပျပွီး သောကျတာပါပဲ.. Extract လုပျတဲ့အခါ 75 % ethanol ကိုသုံးရပါတယျ.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဖွူမြိုးဆိုရငျ သူ့မှာပါဝငျတဲ့ ဆေးဖကျဝငျအာနိသငျရဲ့ ၄% နီးပါးလောကျဟာ Alcohol မှာပြျောဝငျပွီး ၅% လောကျဟာ ရမှောပြျောဝငျလို့ဖွဈပါတယျ.. အနီမြိုးဆိုရငျတော့ Alcohol မှာ ၅ % ကြျောကြျောနဲ့ ရမှော 7% နီးပါး ပြျောဝငျမှုရှိတာ တှရေ့ပါတယျ.. Extract ကိုထုတျပွီးသုံးရငျ ခုနကပွောသလို မှိုတကျမှုလညျး မရှိတော့တဲ့အပွငျ တဈနကေို့ ၂ လုံးလောကျပဲသောကျရလို့ အဆငျပိုပွပေါတယျ.. Allergic ဖွဈစနေိုငျတဲ့အမွဈတှလေဲ အဖတျတှထေဲမှာ ကနျြခဲ့လို့ အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ..
Crd:Dr,Khin Maung Lwin-FAME